प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्ति पाएकालाई सडकको नाली खन्नेदेखि ढुङ्गा फुटाउनेसम्मका काम! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्ति पाएकालाई सडकको नाली खन्नेदेखि ढुङ्गा फुटाउनेसम्मका काम!
रसुवा, २९ जेठ, २०७६ । रसुवामा आइतबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । स्थानीय तहबाटै पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु भएको हो । जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा लागू गरिएको कार्यक्रमबाट १ सय ३ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुगेकाले एक महिनाका लागि करार सम्झौता गरिएको छ । कार्यक्रममा छनोट भएकाहरू वडाले तोकेको काम गर्ने छन् । यसरी नियुक्ति पाएकाले सडकको नाली खन्ने, जाली भर्ने, सिँचाइको काम गर्ने, ढुङ्गा फुटाउने लगायतका काम गर्ने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रम सुरु भएकाले एक महिनाको लागि सम्झौता गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना लामाले बताइन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसले निरन्तरता पाउने छ’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहबाटै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम भएकाले यसले प्राथमिकता पाउँछ ।’
Tagged प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रसुवा रोजगारी
Tags: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, रसुवा, रोजगारी